Wafdi ay Hoggaamineyso Wasiirka Caafimaadka DFS oo Baydhabo Gaaray – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Wafdi ay Hoggaamineyso Wasiirka Caafimaadka DFS oo Baydhabo Gaaray
Masuuliyiin Ka tirsan Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ay Ugu Horeeyaan Madaxda Wasaaradda Caafimaadka Koonfur Galbeed, iyo bahda Caafimaadka Magaalada Baydhabo ayaa garoonka diyaarada Baydhabo Ku soo dhaweeyey Wafdi ay hogaamineyso Wasiirka Caafimaadka Dowladda Federaalka Soomaaliya Marwo Fowsiya Abiikar Nuur.
Dr Ahmed Al-Mandhari iyo Dr Maalik oo ah Masuuliyiinta Ugu sareysa Hay'adaha WHO iyo UNICEF ayaa sidoo kale qeyb ka ahaa wafdiga,soo dhaweyn kadib waxaa ay booqasho ku tageen Mid kamid ah Kaamamka Baydhabo Kuyaala oo xiligaasi kasocotey Fulinta adeegyo caafimaad oo loo fulinayo bulshada, Waxaana Halkaasi si wadajir ah Madaxda Wasaaradda Caafimaadka DFS iyo tan Koonfur Galbeed, masuuliyiinta Hay'adaha WHO iyo Unicef ay ugu daah fureen ololaha Talaalka Qaran ee Jadeecada iyo Dabeesha 2019 .
intaasi kadib wafdiga ayaa siwadajir ah ubooqdey isbitaalka Guud ee Gobolka Baay,halkaasi oo si diiran ay ugu soo dhaweeyeen Maamulka isbitaalka iyo shaqaalaha guud ee halkaasi ka hawlgala,Waxaana mid mid ay ubooqdeen qeybaha kaladuwan ee isbitaalku ka kooban yahay.
Wasiirka Wasaradda caafimaadka Maamulka Koonfur Galbeed soomaaliya Mudane Mohamed Osman Haji ayaa aad ugu mahadnaqey booqashada Masuuliyiinta Hay'adaha iyo wasaaradda Caafimaadka Federaalka ay baydhabo kusoo gaareen wuxuuna sheegey inay gacan kageysan doonaan fulinta adeegyo caafimaad oo loo qabanayo bulshada.
Masuuliyiinta Hay'adaha WHO iyo Unicef oo ayaguna hadley ayaa waxay sheegeen in ay gacan buuxda kageysan doonaan sidii wasaaradda caafimaadka KGS gacan buuxda ay ugu siin lahaayeen fulinta Adeegyo caafimaad oo dhameystiran.
Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Dowladda Federaalka Soomaaliya oo kahadashey safarka ay baydhabo ku gaartay ayaa kamahad celisey sida diiran ee loo soo dhaweeyey waxaana ay sheegtey in wasaaraddu ay dardargalin doonto Olalaha talaalka Qaran 2019 oo ay baydhabo kudaahfurey sidoo kale na ay fulin doonaan adeegyo caafimaad oo tayo leh.
Ugu dambeyntii wafdiga ayaa xaruunta madaxtooyada Baydhabo kula kulmey Musimaha Madaxweynaha Koonfur Galbeed soomaaliya, halkaasi oo ay kaga warbixiyeen ujeedkooda ugu weyn ee safarka baydhabo kuyimaadeen iyo waxyaabihii ay kusoo arkeen goobaha ay booqashada kutageen, kusimaha madaxweynaha ayaana aad ugu mahad naqey daahfurka Olalaha talaalka Jadeecada iyo Dabeesha iyo booqashadooda Kaamamka iyo isbitaalka Guud ee Gobolka.
Kusimaha Madaxweynaha Koonfur Galbeed ahna Guddoomiyaha baarlamaanka Mudane Abduqaadir shariif sheekhuna ayaa ugu Madaxda ugu mahad naqey booqashadooda baydhabo wuxuuna si gaar ah kaga mahad celiyey mashruuca ay baydhowa kadaahfureen oo muhiim u ah dadka iyo deegaanka.